Elula "Élire" (Ukunyulwa) Iingxowa zeeLwimi zesiFrentshi
"Unyulo" Ukuze Ufunde Ezi ngxaki zoLwimi lwesiFrentshi
NgesiFrentshi, isenzi isenzo sithetha "ukhetho." Nanini na xa ufuna ukuyisebenzisa kwixesha elidlulileyo "elikhethiweyo" okanye ixesha elizayo "liya kukhetha," kuya kufuneka udibanise isenzi. Abafundi baseFransi bayazi ukuba le nto inokuba ngumngeni kwaye i- élire yenye yezo zizenzi eziphosakeleyo.
Ukudibanisa isiNgesi sesiFrentshi uElire
Izenzi-magama zesiFrentshi ziyinkimbinkimbi kunokuba ziNgesi. Kungenxa yokuba ukuphelisa isenzi ukuguqula kungekhona nje ngexesha lesigwebo kodwa kunye nesigama sesigama.
U-Élire isenzi esingaqhelekanga kwaye kufana namanye amagama afana nokubhala (ukufunda) , reélire (ukukhethwa kwakhona), kunye ne- relire (ukuze ufunde kwakhona, ubuyekeze). Nangona oku akuyona ndlela eqhelekileyo yokuxubusha, la magama ambalwa enza ukuba lonke iqela libe lula lula.
Ukuze udibanise umyalezo , jongana nesibhengezo sesifundo kunye nexesha. Ngokomzekelo, "ndikhethile" ngu " j'élis " ngoxa "siya kukhetha" ngu " sisi élirons ." Hlalani ngalunye kwezi zinto kumxholo ukuze ufunde indlela yokuyisebenzisa kwiingxoxo zakho zesiFrentshi.
elis élirai elisais
elis eeras elisais
kutyalwa élira elisait
elisoni elirons ezikhethiweyo
elisez ulawulo élisiez
ekhethiweyo ulawulo sisa
Ukuthatha Inxaxheba Kwamanje Ye- Élire
Okwangoku isabelo sinye ifom yefowuni omele uyazi. Ukuze uyifake, yongeza intsimbi kwisenzi ishicilela ukuvelisa i- élisant . Ngaphandle kokuyisebenzisa njengesenzi, uya kufumana ukuba luncedo njengesiprofetho, i-gerund, okanye isibizo kwezinye iimeko.
Ngexesha elidlulileyo le- election , ungakhetha ukuba awufezekanga okanye i- compé compé . Ukwakhiwa kwesi sithuba, qalisa ngesigama sesigxina kwaye udibanise isenzi esincedisayo kufuneka ulingane nalo. Emva koko, qha ga mshelana .
I-passé compé ihlangana ngokukhawuleza: "Ndikhethile" ngu " je élu " kwaye " sikhethiweyo " ngu " sisi élu ."
Elula ngakumbi Elire Conjugations
Phakathi kwezinye izinto ezilula zokufunda abafundi abangamaFrentshi kufuneka bazi ukuba zilandelayo. Awukwazi ukuyisebenzisa ngokuqhelekileyo, kodwa ingaba lula ukukwazi.
Kwiimeko ezinqabileyo, kwaye ngokuyinhloko xa ufunda okanye ubhala, ungabona i-passé elula okanye ingaphelelanga . Ngokuphindaphindiweyo, ukusetyenziswa kwamagama kunye nezimo zesimo esetyenziswayo. Ngasinye isichaza ukuba akukho siqinisekiso kwisenzo sesenzi ngenye indlela okanye kwifom.
elise élirais elus elusse
elises élirais elus amaqela
elise élirait elut elût
ezikhethiweyo ellions elûmes iziphumo
élisiez éliriez élûtes elussiez
ekhethiweyo zikhulu elurent e dlu lileyo
Ukusebenzisa i-exclamations, iimfuno kunye nezicelo ezimfutshane, sebenzisa ifom efunekayo . Xa wenza njalo, weqa isibhengezo sesifundo uze usebenzise "u- élis " kunokuba "u- élis ".
Yiyiphi Amazwi Okufanele Uwasebenzise NgesiFrentshi?
Uphephe i-Pinch Flat
Imyuziyam yaseNorway yeGlacier ngu-Architect uSverre Fehn
Ubungakanani Bokusebenza Isibonelo Sengxaki
Ukubeletha Kwaphakathi kunye nokubhaptizwa
Indlela Yokuxelela Ukuba I-Corvette Yakho Inombalo Elinganayo - Ngowe-1960-1996 iCorvettes
Kuk Swamp: Izolimo zakuqala ePapua New Guinea
Konke Okufuneka Ukwazi Ngo "Muchacha Italiana Viene Casarse"
Ukufa kwe-American Chestnut
I-Seattle Pacific University